Noocyada baradhada ee ugu caansan: "xiddigaha" xilliga 2020 - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga News
Noocyada baradhada ee ugu caansan: "xiddigaha" xilliga 2020
Bilowga guga, waqti aad u yar ayaa ka hadhay ka hor la beero, iyo in badan oo beeraleyda baradhada ah ayaa horey u go'aansaday noocyo ay ku tartami doonaan sanadkaan. Taasi waa baahi weyn Waqtigan xaadirka ah, waxaan weydiinay soosaarayaasha beeraha inay u sheegaan Andrei Kiselev, madaxa Qaybta Dheriga ee Saliidda AgroAlliance-NN LLC.
- Xulashada noocyo kala duwan had iyo jeer waxay kuxirantahay gobolka. Beeraha koonfureed (Gobolka Rostov, Krasnodar Territory) waxay door bidaan inay ku beero midowga hore ee Colombus iyo Red Scarlett. Gobolka Astrakhan, isla 'Red Scarlett' wuxuu muujinayaa natiijooyin wanaagsan, Riviera, Arizona, iyo Memphis ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Dhammaan noocyadaani waxay kuu oggolaanayaan inaad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah u hesho go'id wanaagsan.
Gobollada dhexe, beeraleyda ayaa badanaa ku beero Gala, Vega, Colomba, Red Scarlett, Queen Anne, Madeira, Baltic Rose.
Ma ballanqaad badan baa in la beero noocyo "cad" ama "casaan" ah?
- Beeraha Ruushku waxay jecel yihiin baradho “cad”, waxaa la rumeysan yahay inay sifiican u iibsadeen. Celcelis ahaan, noocyo cadaan-cagaar ah ayaa leh 75-80% safka. Laakiin midabka maqaarku waa inuu sidoo kale goobjoog ahaadaa, waxaa jira sannado ay iyagu yihiin kuwa "tooganaya".
Noocyada midabaynta casaanka ee ugu caansan waa Red Scarlett?
- Haa, dhowr sano oo isku xigta. Ujeedo ahaan, wali way adagtahay in la doorto noocyo badan oo kula tartami kara dhinac kasta. In kasta oo ay jiraan fursado xiiso leh suuqa, dabcan. Kuwa aan horey u soo xusnay, waxaan kicinayaa Memphis, maahan sidii hore ee Sc Scarlett, laakiin waxay leedahay soo saar aad u sarreeya, u dulqaadashada abaarta, waxayna ku habboon tahay kaydinta muddada dheer. Ka sokow, waxay aad u soo jiidataa iibsadayaasha - kani waa baradhada leh digriiga jilicsan iyo maqaarka quruxda badan ee dhalaalaya.
Waxaan sidoo kale xusayaa in Baltic Rose - ay si fiican u muujineyso duurka, waxay ku habboon tahay maydhashada, waxayna leedahay fursad kasta oo ay ku gasho kooxda hoggaamiyeyaasha kala duwan ee dalkeenna.
Iyo inbadan oo ku saabsan cad-cad-cad?
- Marka hore, tani waa Gala. Kala duwanaanshaha ayaa si weyn looga yaqaanaa, kuna koray gobollo badan. Mawduuca tikniyoolajiyadda beeruhu waxay bixisaa miro tayo sare leh. Naftaada u xukumaan: haddii iskucelceliska sicirka suuqa ee barandhada uu yahay 8 rubles / kg, ka dibna Gala waxay bixiyaan 9-10 rubles / kg. Vega waa waxyar oo aad looga yaqaan, abaar badan oo dulqaad badan ayaa dulqaad badan.
Madeira waa mid aad u xiiso badan: noocyo dalag dhexdhexaad ah oo kala duwan, aad u qurux badan - digriiga ayaa dhalaalaya, si siman oval - ugufiican dharka.
Dabcan, Colomba waa noocyo hore oo kala duwan oo bixiya tayo joogto ah. Baradhadu waxay ku habboon tahay maydhista, waxay u egtahay mid qurux badan xagga baakadaha, had iyo jeer waa ikhtiyaar loogu iibiyaa silsilada tafaariiqda.
Sannadkan wuxuu ahaa jiilaal aad u diiran, khabiiro badan ayaa sheegaya in aan u baahan nahay in aan isu diyaarinno duulaanka cayayaanka iyo cudurada. Arrintan ma in la tixgaliyaa marka la dooranayo noocyo?
- Taas beddelkeeda, waa inaad fiiro gaar ah siisaa tayada abuurka shinnida, haddii kale way adag tahay in la tillaabo natiijo wanaagsan xilli xilli kasta.
Tags: VegaGalaColomboMadeiraCasaan guduudanbaradhada abuur
ShareShare152Share110Si aad u soo diri